अनायोजित | 24onlinenews | Digital News Paper | डिजिटल पत्रिका
१० मंसिर २०७७ ०८:४५
अरुणोदयसँगै स्फुरित मनका अनेकानेक भीडहरूः यो गरौं कि त्यो गरौं, यता जाऊँ कि त्यता जाऊँ, यसो गर्दा अनुकूल होला कि उसो गर्दा, कुन मार्गले जीवनको सही मूल्यबोध गराउला … इत्यादि । यस्तो द्विविधायुक्त मनस्थितिले उत्पादन गरेको घुइँचो, हेर न जुन पथावरोधको निम्ति कुन रीतले सक्रिय भएको । त्यो, ट्राफिक लाइटको मर्यादासम्म राख्न जान्दैन । जेब्राक्रसिङ्मा कैयन् पाउहरू चलायमान छन् । दृष्टि दिँदैछु ऊ: त्यो एक जोडा के सम्झिएर हो कुन्नि बीच मार्गबाटै प्रत्यागमन भयो । हुनसक्छ भ्राम्य चेतनाले त्यसो गराएको थियो । कति पाउहरू अन्योलमा थिए, कुन दिशालाई अवलम्बन गरूँ ? अभर परिने पो हो कि ? त्यसै क्षण आफूलाई पर्गेल्दै रहेँ मेरा पनि विचरा ! अन्योलमै रहेछन् । परन्तु अघि बढिरहेँ, जसो होला । अब फर्किएर मार्ग बदल्ने समय थोरै पनि छैन, यस चिन्ताले गति बढाउन आग्रह गर्दा पक्डिएको अनिश्चित मार्गमा, थाहा छैन कहाँ पुगेर पूर्णविराम लाग्ने छ । गूगल खोज्दै थिएँ, अधिक दूरतामा थियो त्यो गन्तव्यको रातो विन्दु । हो, त्यसै दिन मेरो मार्ग समाप्त होला, जुन दिन लोकेसनको निलो थोप्लो रातो थोप्लोमा गएर प्रतिस्थापित हुनेछ । लामो गन्तव्यभित्रका अनेकन उपगन्तव्यहरू जुन हामीले नचाहेरै पनि हिंड्नु छ, कारण त्यही भोग्नको लागि हामी जन्मिएका छौँ । परन्तु हामीलाई त्यो ज्ञात हुँदैन । अदृश्य तर पूर्व नियोजित कार्य कारणका श्रृङ्खलाहरू जब घटित हुँदै जान्छन् अनि बाध्य भएर भन्ने छौँ मेरो नसिबमा यस्तै लेखिएको रहेछ ।
ग्राम्य जीवन नागर परिवेशसँग एकाकार हुन समर्थ भइसकेको थिएन । बिदाको दिन, आज धेरै ठाउँमा पुग्नु छ । पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु, प्रिय उन्नतिलाई भेट्नु … । हाम्रो परिचयको प्रथम दिन आज बार–बार स्मरण भई रहेको छ । जीवनटारमा अवस्थित उनकी शारदा दिदीको आवास नजिकै छ मेरो निवास । बाबुका दिदी बहिनीलाई उन्नति कहिल्यै फुपू भन्न रुचाउँदिनन् । फुपू भन्ने शब्द उनलाई धेरै टाढाको सम्बन्ध जस्तो लाग्छ रे । शारदा उनै फुपू हुन् जसलाई उनी कान्छीदिदी भन्ने गर्छिन् । शारदाको छोरो आर्जन मेरो अन्तरङ्ग साथी, समवयी । एउटै कलेजको विद्यार्थी पनि । हामी प्रायः ग्रुप स्टडीमा समाहित हुन्छौं । हार्दिक र मैत्री भावले जोडिएको आर्जनको र मेरो सम्बन्ध । त्यस दिनको पूर्व सन्ध्यामा आर्जन अध्ययनको निम्ति मकहाँ आइरहेको छ ।
बेलुकीको भोजन पश्चात् आर्जनको र मेरो सानो संसार अर्कै लोकमा अवतरित हुनेगर्छ । म गणितीय सूत्रहरू एकपछि अर्को गरी मस्तिष्कीय भण्डारबाट उघाउँदै थिएँ । आर्जनको मोबाइल बजिरहेको छ । यद्यपि रिसिभ भएन । ऊ बाथरुम गएको थियो । मैले त्यसप्रति कुनै चासो राखिनँ । रिङ्टोनको आवृत्ति भइरह्यो, अझै पनि आर्जन आइपुगेन । हो, त्यसै दिन मैले उन्नतिको नाम पहिलो पल्ट सुनेँ । शायद कुनै महत्त्वपूर्ण सन्देश विनिमय गर्न आएको कल हुनुपर्छ, निश्चय । सामान्य हाई ह्यालोको निम्ति आएको फोन त्यो थिएन । किनकि फोनको पुनरावृत्तिले त्यही अर्थ सम्प्रेष गथ्र्यो । सूचना प्रवाहमा कुनै विलम्ब नहोस् भन्ठानेर फोन उठाएँ, “ हलो … ।”
मेरो आवाजले पक्कै पनि उता केही सन्देह उब्जायो होला । बन्धित स्वरमा कुनै यौवनाले भनिन्, “यो नम्बर आर्जनको होइन ?”
“निश्चिन्त रहनोस्, आर्जनको फोनमा अरू कोही बालिरहेछ … ” मैले भनेँ ।
“ऊ अहिले कहाँ छ ? किन उसले फोन उठाएन ? यस मोबाइलसँग तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ … ?” युवतीका यस्ता प्रश्नसँग मलाई कुनै असहज अनुभूति आवश्यक थिएन । वास्तविकतामा कुनै नाटकीय तत्वको जरूरत नपर्ने रहेछ । संशय भाव जाग्नु नै थिएन । भनेँ, “आर्जनको अभिन्न मित्र हुँ, म । ऊ बाथरुम गएको हँुदा फोन उठाएँ, जसको निम्ति क्षमा चाहन्छु ।”
उनको कोमल वाणी कति मधुर र स्निग्ध, कर्णप्रिय स्वरमा भनिन्, “त्यसमा केही आपत्ति छैन, अन्यथा नठान्नु । फोन जसलाई गरेको थिएँ, त्यसमा उसको ध्वनि नपाउँदा मैले स्पष्टीकरण मागे जस्तै भएछ । क्षमा माग्नुको अपरिहार्यता नै कहाँ ? यहाँ कसैको भूलत्रुटि छैन ।”
अपरिचित हुँदाहुँदै पनि मन भइरहेछ उनीसँग केही संवाद गरूँ । मानौँ, हामी पूर्व परिचित हाँै । म उनको नामप्रति अञ्जान थिइनँ । फोनको रिङ्टोनसँगै उनको आंशिक परिचय बोध हुँदै थियो । तथापि मैले उनीसँगको संवादलाई विलम्बित गराउन अबोधि भएर सोधेँ, “यति मीठो स्वर म कसको सुन्दैछु … ?”
सोचेको थिइनँ निष्कपट भावमा सहजै उत्तरित हुनेछु । निर्दोष बालक भएर भनिन्, “जस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो उन्नतिको आवाज हो” उनले संक्षिप्त परिचय दिइन्, “म तपाईँको अन्तरङ्ग साथी आर्जनकी बहिनी हुँ । अर्थात मामाकी छोरी । ”
उन्नतिको एकै वाणीमा म अधिक प्रभावित भएँ । त्यस परिचयमा कुनै कृत्रिमता थिएन । मोबाइलमा जुन नाम सेभ गरिएको थियो, हो उनले त्यही नाम उल्लेख गरिन् । त्यस दिन हाम्रो संवाद त्यतिमै सीमित भयो । इच्छा थियो अरू थप कुरा गरौं । यस अघि आर्जनसँग म कहिल्यै यसरी क्रुद्ध भएको थिइनँ, जसरी यस घडी भइरहेको छु । भित्रभित्रै क्षुब्ध भएँ । तथापि मेरो क्षोभ अप्रकट थियो, उसले बोध गर्न सकेन । उन्नति र मेरो संवाद उसको प्रवेशसँगै विच्छेदित भयो ।
मेरो अन्तस्करणमा बाँचिरहेको त्यो अभीप्सा थाहा छैन पूर्ण हुन्छ या हुँदैन । त्यस दिन पनि संयोगकै खेल थियो, उन्नतिसँगको वार्तालाप । उसो त वार्तालाप पनि के भनौँ ? कति नै कुरा गर्न र ? सामान्य बोली मिसिनुदेखि अरू … । म त्यस्तै संयोगको प्रतीक्षामा बस्न थालेँ, तैपनि उन्नतिसँग फोनमा कुरा हुन सक्छ कि … । ज्ञात भनौँ या अज्ञात मेरा वाञ्छालाई आर्जन समक्ष देखाउनु छैन । बस, मनमनै कामना गरिरहेँ एक वचनमै मोहनी मन्त्र भेदेर जानेलाई ।
उन्नतिको चपलता मलाई मन परिरहेको थियो । अदृश्य वाणीमा उनीप्रति म यति आकृष्ट हुँदैछु भने स्वयंलाई प्रत्यक्ष देख्दा मेरोे कुन गति होला ? कुनै यौवनाको निम्ति म यति दुर्बल भइहाल्ने युवक त होइन । उसो भए के भइरहेछ त ? किन यसरी अञ्जान अभिलाषा पालिरहेको छु ? सामान्य एक युवतीको आवाजमा क्लान्त हुनु के मेरो परिचय यही हो ? … कतिको मनासिब होला, … ?
आर्जनको घरमा के कति कारणले हो कुन्नि त्यस दिन बिजुली बत्ती आएको थिएन । त्यसैले यता मोबाइल चार्जमा राखेर ऊ कतै गएको छ । हो, त्यही समयमा फेरि उन्नतिको फोन आएको थियो । फोनको घन्टीसँगै मलाई आत्मीयताको आभास भइरहेको थियो, निशंकोच फोन उठाएँ । आज उनलाई मेरो आवाज अवश्य पनि अपरिचित लागेन । आर्जन र मबीचको वाणी खुट्याउन सकेकी उनले अलिकति रसिकता, धेरै जिज्ञासा र बाँकी स्वाभाविकताले भरिएर भनिन्, “आर्जनको फोन उठाउने ठेक्का तपाईँले नै लिनुभएको छ कि क्या हो ?”
“त्यसरी नै भनिहाल्न त अलिक नमिल्ला कि … ” मैले भनेँ । अस्ति उन्नतिले मेरो परिचय लिन भ्याएकी नै होइनन् । त्यसो त उनी मेरो नाम जान्न इन्छुक छिन् या औपचारिकता पूरा गर्नु आफ्नो धर्म ठानिन् । सोधेकी छन्, “हजुरको शुभ नाम ?”
उनले मलाई आफ्नो वास्तविक परिचय दिएर गहिरो प्रभाव पारिसकिन् भने म किन आफ्नो परिचय छलेर उल्टो भ्रम फिंजाऊँ । म त उनीसँग निकट हुन चाहिरहेको छु, त्यस्तो मान्छेसँग फेरि कसरी झूट बोऊँ ? मेघमुक्त आकाश जस्तै उघ्रिएको स्वरमा भनेँ, “म प्रयास हुँ ।”
“अँ, प्रयास ।”
“यति राम्रो नाम मैलै पहिलो चोटि सुन्दैछु । सरल तर गम्भीर … ।”
“साँच्चि नै राम्रो लाग्यो ?”
“अँ, मन पर्ने … ।”
“ धन्यवाद, मेरो नाम मन पराइदिनु भएकोमा ।” मैले यसो भनिसक्दा उताबाट स्मित हाँसोको मीठो गुञ्जन सुनियो, सँगै वाफिलो झोक्काले स्पर्श गरे जस्तो अनौठो अनभूति पनि । मानौँ म उनकै समीपमा छु ।
आज उन्नतिको स्वर केही खुले जस्तो लाग्छ, उन्मुक्त । आश्वस्त भइन्, निश्चय । हामी दोस्रोपल्ट दूरभाषमा कुरा गरिरहेका थियौँ । मेरो नामलाई महत्त्व दिँदै फेरि भन्न लागिन्, “कस्तो अर्थपूर्ण, गहन … नामकरण गरिएको । कुनै पनि कार्य सिद्धि नहुन्जेल भिडिरहने प्रयासशील व्यक्तिहरू बडो पौरखी हुन्छन् रे ! जीवनमा प्रगति गर्नेहरू तिनै हुन् । आफ्नो सम्बोधित नामलाई अर्थपूर्ण बनाउँदै जानु होला … ।” उनले यसो भनेको बेला मन्द हाँसोको उन्मादिलो राग प्रस्टै आइरहेको थियो ।
आजसम्म मैले आफ्नो नामको अर्थ खोजेकै रहेनछु । धन्य उन्नति ! तिमीले नै यस क्षण आएर प्रयासको अर्थ र महत्त्वलाई बोध गराइदियौ । अज्ञानमै थिएँ, यतिको समय ।
मलाई यस्तो लागिरहेछ, बल्ल चेतनाको बिर्को खुल्दै थियो । मैले पनि उन्नतिको अर्थ खोज्न लागेँ, कम अर्थपूर्ण थिएन उनको नाम । विकास, समृद्धि, प्रगति, परिवर्तन, उद्यम, अभिवृद्धि … यी सबै उन्नतिकै अभिप्राय थिए । प्रकारान्तरले अक्षुण्ण प्रयासको उपलब्धिमा आएको क्रमिकता नै के उन्नति होइन ? अर्थ लगाउँदै जाँदा मैले प्रयास र उन्नतिमा प्रशस्त समता पाएँ । एकार्काका परिपूरक जस्तै । प्रयास नगरी उन्नति के सम्भव छ ? उन्नति प्रयासकै पर्याय … । प्रयास छ र त उन्नति । उन्नतिकै सान्निध्यमा प्रयास । एकको अनुपस्थितिमा अर्कोले कसरी उच्चता भेट्टाउन सक्छ ?
मनमा अनन्त इच्छा जागृत भएर आउँछ कल्पित हिसाब गर्ने । ए, साँच्चि उनले प्रयास र उन्नतिबीचको सामञ्जस्यलाई खुट्याउन सकिन् कि सकिनन् होला ? संयोगले कसरी उही अर्थ र भाव जताउने हामी दुईको अप्रत्याशित भेट गरायो । कसले रचाउँदैछ यस्तो अमञ्चनीय संयोग ? विचारोद्रेक दीर्घ सुस्केरासँगै पूर्वस्थितिमा फर्किएर उलनाई भनेँ, “उन्नति ! तिमीले आफ्नो नामका अनेकन अर्थहरू खोजिनौ ? तत्क्षणमै जो कोहीको नामार्थ विश्लेषण गर्न सक्नेलाई आफ्नो नामको अर्थान्वेषण कसरी असाध्य हुन सक्छ ? थाहा छ तिमीलाई हर क्षेत्रमा उन्नति गर्न कसको जरूरत पर्नेगर्छ ? साधनारत जीवनको फलिभूत श्रेय कसलाई जानेछ ? उही प्रयासलाई होइन ? एक पटक फर्केर हेर त उन्नति र प्रयासबीच सम्बन्धको तादात्म्य ।”
मेरो कुरा उन्नतिले कति बुझिन् या बुझिनन्, मलाई थाहा भएन । त्यसो त मैले अरू कुरा नै के गरेको थिएँ र ? बस, उन्नति र प्रयासलाई एकअर्कामा अथ्र्याएको न थिएँ, शब्द तहमा अर्थको सम्प्रेषण । उनको अनुच्चस्वर मिठासपूर्ण थियो । त्यो मृदु हाँसोसँगै प्रतिजवाफको पर्खाइमा थिएँ, त्यसै बेला आर्जन आइपुग्यो । उन्नतिसँगको दोस्रो संवाद त्यहीँ रोकियो ।
त्यस्तै एक दुई संयोग पश्चात् हामीलाई आर्जनको सान्निध्य र उसको भरोसामा रहनु परेन । उसको यन्त्र हाम्रो लागि निकम्मा भइसकेको थियो । निकटको अनुभूति गराउन हामी आफ्नै दूरभाष र सञ्जालमा जोडिई सकेका थियौँ । यौवनकालको संवेदनशील मन कति तरलित भइदिन्छ ! समय असमय कुनै पनि क्षण हाम्रो निम्ति बाधित थिएन । हाम्रा हर संवाद यसै त्यसै उन्मादित भई ब्यूँझिने गर्थे । आमोदपूर्ण वार्तालापले देहको रोम रोममा विद्युत तरङ्ग प्रवाहित हुन्थ्यो, आग्रह गर्दै थिए खै कुन्नि के के हो । लाग्छ, जतिबेला हामी एक आपस्त चुमिरहेका थियौँ, त्यसै घडी आफ्नो असंयमप्रति सचेत हुँदै जति दूर हुन खोज्थ्यौँ उति नै समीप … ।
उन्नतिसँगको प्रत्येक स्नेहपूर्ण भेट मलाई किन यति बिघ्न नवीन लाग्ने गर्छ ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । कलेजमा मेरा कैयन् साथीहरू थिए । परन्तु तिनीहरूको निकटतामा त्यस्तो कुनै अनुभूति हुन सकेन जस्तो उनीसँग हुनेगर्छ । यौवनले पूर्णता दिँदै थियो, आसक्तिको रापिलो शिखाले त्यसो गरायो भनौँ पनि मेरा सङ्गतमा रहेका अन्यान्य सुन्दरीहरूसँगको अनुराग र आकर्षणमा कमी थियो म कसरी भनुँ ? यद्यपि तिनीहरूप्रतिको आसक्तिले मलाई दुर्बल गराउन सकेन, जति नै अनुरागी भए पनि ।
मैले कतिलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न सक्थेँ अहँ, राखिनँ । कति आए प्रेम प्रस्तावहरू पनि … । त्यस घडी मनमा कुनै खलबली मच्चिएन । तथापि आज उन्नतिको एक फोनले नै किन उद्वेलित गराउँदैछ यो हृदयलाई ? वासनाको वशीभूतले मलाई यसो गरायो त ? त्यसो भए अस्ति भर्खर प्रस्तावक प्रमिला सिंहको प्रेम मलाई किन स्वीकार्य भएन ? के कमी थियो र उसमा । रूप, सौन्दर्य, दीप्तिमय आभा, आकर्षक वदन । सूर्योदयसँगै फक्रिएको फूल, शीतले शोभा बढाइरहेकै थियो । सूर्य तेजलाई नै फिका गराइदिने कत्रो सौन्दर्य ।
अस्थिर चित्त उन्नतिकै स्मरणमा भुल्न चाहन्छ, उनकै समीपको कल्पित लोकमा आफूलाई राजकुमारको दावी गर्ने यो मन प्रशस्त अबूझ भइदिन्छ । आफैँआफ कल्पनाको व्यवधान उठाएर विकट परिस्थितिको सामना गर्न मञ्जुर यो मन कति अघोरी छ । शब्द पाउँदिन जसलाई प्रस्तुत गर्ने । बोध भएर पनि अबोधि बन्न राजी … जसलाई म के भनुँ ? मनोजगत्को विकलतालाई मतलब राख्दैन । किमार्थ राख्दै राख्दैन ।
काठमाडौँ प्रवेशसँगै बदली भएको मन । गाउँमा आफैँभित्रका भीडहरूले मात्र सताउँथे । तथापि यहाँ बाह्य भीडसँग पनि सामना गर्न समर्थ हुनुछ । आरम्भका दिनमा निसङ्ग ओल्लो चोक पल्लो चोक पुग्ने साहस पनि आउँदैनथ्यो कतै अभर परिन्छ कि भन्ने भयले । मनमनै सोच्थेँ, यहाँका मान्छेहरू कति निडर छन्, साहसी पनि । हेर त निराश्रित, एक्लै एक्लै भीडलाई पन्छाएर कसरी मार्ग पहिचान गर्न सकेका ? लाग्थ्यो, म पनि तिनीहरू जसरी शहरका गल्ली, चोक, व्यस्त भीडहरूमा एक्लै दुक्लै हिँड्न सकुँ तर कहिले … ? जतिबेला मनमा एउटा विचित्रको अनुभूति हुन्थ्यो, त्यसलाई वर्णन गर्न मसँग भाषा छैन ।
यस अन्योल परिस्थितिमा पनि मलाई राजधानी आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो, यद्यपि यहाँ मेरो कुनै घर छैन । उता आत्मीय भावले छोप्थ्यो, जहाँ म कसैसँग परिचित नै छैन । मलाई यस्तो किन भइरहन्थ्यो भने यो उन्नतिको शहर हो । यहाँका कैयन् घरहरूको जङ्गलमा उन्नतिको आवासले पनि साथ दिएको थियो, घनीभूत बनाउनको निम्ति ।
म जताततै उन्नतिकै व्याप्तिमा बाँचिरहेको थिएँ । रहनसहन, रीतिरिवाज, खानपान, परिधान, यत्रतत्र सर्व ध्रुबमा उन्नतिकै सुवास पाइरहन्थेँ । प्रिय उन्नति ! तिमी सबैको प्राण हौँ । हेर न म कम गौरवान्वित छु ? जहाँ तिमी जस्ती मायावीलाई प्रेमिकाको रूपमा पाएको छु । मलाई माया, सदभाव र सदिच्छाको छहारीमा राखेर तिमीले पुण्य कमाएकी छौ । म धन्य छु । तिमी धन्य छौ । एक दिन सबैलाई ज्ञात हुनेछ, यो उन्नति र प्रयासको शहर हो । अनि उन्नति र प्रयासको त्यो प्रेम कहानी पनि अज्ञात रहने छैन ।
म उन्नतिकै भरोसामा, उनकै आग्रहमा यो घुइँचैघुइँचोको शहरमा प्रविष्टित भएको थिएँ । उनैले मलाई दिशा निर्देश गरेकी छन् । शिक्षार्जनको निम्ति यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने परामर्श पनि उनले नै दिएकी हुन् । प्रशस्त प्रतिस्पर्धीहरू बीचको परिष्कार र परिमार्जनले निखार ल्याउनेछ, जीवन सार्थक बन्नेछ भन्ने उनको आशय । उता दाजुको विचार पनि यही थियो ।
त्यस समयको कुरा हो, मैले कलेजमा भर्ना गरिसकेको थिएँ । सूर्योदयसँगै म हर प्रभात क्लास लिन जानेगर्छु । शुरुका दिनहरूमा फन्कैफन्का लाग्ने कलेजको बाटो पहिल्याउन दाइको हार्दिक साथ मिलेको थियो । एक दुई दिन पश्चात् आफैँ आवागमन गर्न समर्थ भएँ । विद्यार्थी राजनीतिमा मेरो कुनै रुचि थिएन । युनियन, नेविसंघप्रति मैले कुनै भेद गरिनँ । बस, उचित–अनुचित, सज्जन–दुर्जन जस्ता गुण अवगुण नै पक्ष विपक्षका चयनित आधार थिए ।
गाउँको कलेजमा विद्यार्थीलाई यति धेरै राजनीति लाग्दैनथ्यो, जति यहाँ लाग्ने गरेको छ । पहाडिया तरुनो केटो सामान्य परिधानमा थिएँ । क्लास राम्रोसँग सुचारु हुन सकिरहेको थिएन, राजनीतिक प्रभावले । बन्द, हड्ताल, नारा, जुलूस, तोडफोड के–के हो के–के ? बित्थामा कलेज आऊजाऊ मात्रै भइरहेको थियो ।
मलाई थाहा छैन तिनी को हुन् ? मेरो समीप आएर ती दिदीले नमस्कार गर्दैछिन् । परन्तु उनी मेरो परिचित होइनन् । मैले उनलाई भर्खर देख्दैछु । म अवाक् भएँ, उनले मलाई किन नमस्कार गरेकी हुन् ? उनी को हुन् ? मलाई नमस्कार गर्न आवश्यक नै के छ ? हाम्रो गाउँ घरमा अपरिचितलाई नमस्कार गर्ने कुनै संस्कार छैन । अझ भनौँ अपरिचितसँग बोल्न पनि आवश्यक ठानिँदैन । तर यहाँ ! … ।
आश्चर्यले भरिँदा मैले दाजुलाई सोधेको थिएँ, “… सुन्नु न … आज कलेजमा एउटी दिदीले निकट आएर मलाई नमस्कार गरेर गइन् । मैले चिन्न सकिनँ, उनी को हुन् कुन्नि ?”
मेरो कुरा सुनेर दाजु मज्जाले हाँस्नुभयो । वहाँ किन हाँस्दै हुनुहुन्छ ? मलाई ज्ञान भएन । विष्मयाभिभूतसँगै म लज्जित भएँ, कतै मैले भूल गरिरहेको त छैन ?
मलाई नमस्कार गर्ने ती दिदी म जस्तै सामान्य पहिरनमा थिइन् । लाग्थ्यो, उनी पनि ग्राम्य जीवनबाट भर्खर भर्खरै शहर प्रवेश गरेकी होउन् । बलजफ्ती हाँसिएको फिका अनुहार मलाई फिटिक्कै मन परेन । निको लागेन त्यो निरस हाँसो ।
दाजुले हाँसो थाम्दै भन्नुभयो, “… यसरी नै बुझ्दै जाने छौ विस्तारमा । आजका अबोधहरू भोलि ज्ञाता हुँदै जानेछन् । एकै दिनमा सम्पूर्ण विषय बुझ्न कठिन छ । धैर्य गर त्यस दिन तिमी आफैँ जानकार हुनेछौ । तिमीलाई नमस्कार गर्ने उनी अरू नभएर कलेजमा राजनीति गर्ने एक युवती हुन् ।”
चार पाँच वर्ष लागेछ मैले ती दिदीलाई सम्पूर्ण रूपमा पहिचान गर्न । त्यस समय उनमा जुन निरीहपन थियो, आज त्यो लेश पनि बाँकी थिएन । अब उनले म जस्तालाई नमस्कार गर्नु पर्नेछैन । मलाई उनको त्यो भावभङ्गीमा फिल्मको कुनै नायिका जस्तो लागिरहेछ । मानौँ, उनी हालकी चर्चित हिरोनी हुन्, भित्तामा टाँसिएका पोष्टरदेखि फिल्महलसम्म जताततै उनकै चर्चा छ । चलचित्र व्यावसायीहरू, फिल्मनिर्देशकहरू, दर्शकदीर्घामा सबै सबै उनकै प्रतीक्षामा छन् ।
शिरदेखि पाउसम्म सम्पूर्णतः ती दिदी बेग्लै भएकी थिइन् । विगतलाई स्मरण गराउने उनमा कुनै तत्व थिएन । उनको खुट्टाको तनेचप्पलले विश्राम लिइसकेछ । पयरहरू स्कुटीको सुविधामा सौखिन थिए ।
क्याम्पसमा फूलमाला र अबीरजात्राको उत्सव चलिरहेको थियो । मञ्चमा आसीन अतिथिगण र सभापति प्रसन्न मुद्रामा, संङ्गीतमय करतल ध्वनिको श्रवणमा विमुग्ध थिए । मलाई भने आजकी नेत्री कलेजकी मनोनीत सभापति उनै दिदीको विगतमा फर्किन मन भइरहेछ । प्रश्न एक पटक आफैँलाई गरेँ, यस क्षण आफ्नो अतीतलाई उनी कसरी स्मरण गर्दै होलिन् ? या त भुलिसकिन् ?
दाजुले भनेको कुरा अहिले मलाई अधिक विचारणीय लागिरहेको छ । हर प्रहर यस्तै त्यस्तै घटनाले मेरा जिज्ञासहरू अर्थिंदै गएका छन् । मजदूर दिवसको दिन थियो । राजधानीका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी सङ्गठनका अगुवाइहरूले मोर्चा गठन गरी टुडिखेलमा जुलूस निकाल्दै छन् । २०६२÷६३ को दशबर्षे जनयुद्ध पश्चात् २०६४ को जननिर्वाचनमा पहिलो शक्तिशाली पार्टी माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको दमदार भाषण सुन्न लालायित जनसागर सानो थिएन । त्यहाँ मजदूरवर्गको हक र हितका कुरा धेरै भए । थाहा छैन त्यो भाषणमै सीमित भयो या व्यवहारमा लागु भयो । भाषणमै परिमित हुनेहरू प्रायः प्रशस्त हकहितका कुरामा जोड दिन्छन् रे ! चाहे त्यो जुन सुकै पार्टीको होस्, जुन संघ संस्थामा आवद्ध रहेको मानिस होस् ।
गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीबाट उठाइएको त्यो लहर मानौँ, भेडै भेडाको वथान थियो । मेरो कुनै रुच्य विषय थिएन इन्क्लाब र जिन्दावादको जुलूसमा सम्मिलित हुने । त्यसो त मुर्दावादको पक्षमा पनि अहँ, मेरो रुचि थिएन । परन्तु म लहलहैमा जाँदै थिएँ पब्लिक युथ क्याम्पसको प्राङ्गणबाट । बस, सामान्य दर्शक बनेर । भीडको एकांश भएर । हो, म त्यही दिनको स्मरण गर्न विगत पल्टाउँदैछु ।
आरम्भको प्रहरमा … अर्थात काठमाडौँ प्रवेशसँगैको मेरो तृतीय दिन । उन्नतिले आजै भेट गरौं भालि नै भेट गरौं भन्दै थिइन् । तर मलाई उनीसँगको भेट भन्दा पहिला उनी बसेको शहर बुझ्न आवश्यक थियो । यसर्थ केही बहानामा मैले त्यस दिन उनलाई नभेट्ने भएँ । भीडसँगै म टुडिखेल जाँदैछु, जुन मेरो पहिलो अनुभव थियो । जहाँ आफूले पछ्याई रहेको मार्ग ख्याल गर्न सक्ने कुनै स्थिति थिएन । जनमासको टाउकै टाउकाको दृश्यमा बाटाको निशानी राख्ने अर्को उपदृश्य मैले भेट्टाइनँ तथापि मेरो साथमा दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो । जसकारण म निश्चिन्त थिएँ ।
हामी खुल्लामञ्च पुगिसकेका छौँ, अहो ! असङ्ख्य मानिसहरूको लहर । कहाँबाट एकमुष्ट भएहुन् यो विघ्न … । मान्छे नै मान्छेको यस किसिमको घन्चमन्च मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ । एकाम्मे हुँदै थियो खुल्लामञ्च । मानौँ, जनसेनाले लालकिल्ला घोषणा गर्दैछन् । हँसिया, हथौडा, कलम र ताराहरूको रक्तरञ्जित जनसागरले आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको होस् ।
मलाई नेताजीको भाषण सुन्नु थिएन, सुन्नकै निम्ति गएको पनि होइन । वस्तुस्थिति बोध गर्न तथा रमाइलो लागेर म गएको थिएँ । हामी खुल्लामञ्चको बीच भागमा ठूलो झण्डाको छहारीमा आश्रय लिइरहेका थियौँ । सूर्य किरण अधिक तेजिला थिए, उत्तप्त । त्यसै क्षण अकस्मात् मान्छेको छाल उठेर भीड तरङ्गीत भयो । कल्लोल, भीडको सुनामीले असुरक्षित मनहरू । खल्बली र कोलाहलमा ज¥याक जुरुक्कै उठेर सर्वजन आफ्नो सुरक्षा गर्न लागे, कति त टाउका टाउकै हाम्फालेर भीड पार गर्न खोज्दै थिए । यथार्थमा के भइरहेथ्यो कुनै ज्ञात भएन । त्यस स्थितिमा संयम गुमाइ सकेका थिए हर व्यक्तिले र मैले पनि । सुरक्षित स्थान कहाँ छ थाहा छैन र पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन दिदी र म भीड पन्छाउन लाग्यौँ ।
मध्याह्नको सूर्य पूर्वी आकाशमा प्रभावहीन भएर पर पुगिसकेको थियो । भीडको सामुद्रिक छालले दिदी र मलाई एकार्काबाट विच्छेद गराइ सकेको छ । अब फोन नगरी भेट हुन सम्भव थिएन । पाइन्टको पकेट छामछुम गर्दै थिएँ, मेरो चेतना खल्बलिइसकेछ । एकतमासको भएर आयो, टाउको फिनिन्न घुमिरहेको थियो । ला … अब कता के गर्नु ? न त दिदीलाई भेट्टाउन सकिने छ त्यस भीडमा । उता मोबाइल हरायो, सँगै मनीपर्स पनि । एक्लै घर फिर्न सक्ने स्थिति मेरो थिएन । साँच्चि नै भनौँ भने आफू बस्दै आएको ठाउँ ठेगाना पनि मलाई थाहा थिएन । यस्तै हुन्छ भन्ने के थाहा ? नत्र केही जानकारी राख्दो हुँ हिजो अस्ति नै … बिहान प्रस्थान पूर्व पनि … । अब कुन ठाउँको खोजी गर्दै म प्रत्यागमन हुन सकौंला ।
दिदीलाई अविश्राम खोज्दैछु, उता कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको थियो । अघि आउँदाखेरि मैले वीर हस्पिटलको राम्रोसँग सम्झना गरेको थिएँ । त्यस दिन क्षेत्रपाटी, असन, भोटाहिटी चोक हुँदै महावौद्ध निस्किएर हस्पिटलको गेट अगाडिबाट खुल्लामञ्च पुगेका थियौँ । जुन कुरा मलाई धेरैपछि बोध हुँदै गयो । दिदीसँग भेट भइहाल्छ कि भन्ने क्षीण आशा बोकेर म रोड वारपार गरिरहेको थिएँ । कसिलो शरीरमा सेतो टिर्सट र निलो जिन्स पाइन्ट लगाएको गोरो अनुहार म जहाँ देख्थँे त्यहीँ हानिएर पुग्थेँ । अरूलाई आघात पु¥याएर मिथ्या भ्रमहरू पन्छाउँदै गर्दा कतिले मलाई गाली दिए, किनकि मैलै तिनीहरूलाई वेपर्बाह धक्का दिँदै दिदीलाई खोजिरहेको हुन्थेँ । कहिले रोडमाथिको आकाशे पुलमा गएर टाढा टाढासम्म दृष्टि दिन्थेँ । कति पटक सब–वेबाट रोड तरेर वीर हस्पिटलको गेटमा पर्खिबस्थेँ । हतास्पूर्ण मेरो आवत जावत देखेर कति भद्रजनले सोधेका थिए, “बाबु के भयो ? कसलाई खोज्दैछौ, यसरी ? किन उदास देखिन्छौ … ?”
एकाम्मे भीड कति समूहमा कति एक्लै दुक्लै छिन्नभिन्न हुँदै थियो । बाँकी रहेका पनि गन्तव्य भेट्दै थिए । लाग्छ, म बाहेक त्यहाँ अभर पर्ने कोही थिएन । मैले त्यस भीडमा आफू जस्तै निरीह कसैलाई देखिनँ । जनमानसलाई नेताजीको भाषणले राम्रै प्रभाव पारेको थियो । प्रत्यागमनको त्यस क्षण प्रायःले भाषणकै प्रसङ्गमा आफूलाई व्यस्त गराएका थिए । म ‘गुलाफको बीचमा उन्यूको रोदन’ भएर दुष्परिणाम भोग्दै थिएँ । मनमनै लाग्यो, अब यसरी कहाँ हुन्छ ? केही उपाय खोज्नु पर्छ तर … ।
खुल्लामञ्च रिक्ततामा सुसाउँदै गयो, जसरी म निर्जन भएर सुसाउँदै थिएँ । त्यसै घडी अवसादले व्याप्त बोझिल मन उन्नतिलाई स्मरण गर्न पुग्छ । म आश्वस्त भएँ त्यही पल । जे भए पनि यो उन्नतिको शहर हो, उनकै कारण भीडबाट दिदीलाई गुमाएँ । अब उनकै माध्यमबाट फेरि भेटुँला । उन्नतिले नै सन्देह मुक्त गराउने छिन् । मलाई केको फिक्री ? म त उनको प्रेमी हुँ … ।
उन्नतिलाई यो थाहा छ, म उनकै आसक्तिमा वशीभूत भई शहरीया जीवनमा एकाम्मे हुन आइपुगेको थिएँ, निर्जन भूमिदेखि अरू परबाट … । आखिर उन्नति कसको ? प्रयासको … ?